U-Huan Luong we-RSP unceda ekulungiseleleni amagcisa eVFX eKamva | I-NAB bonisa iindaba | I-2020 NAB bonisa iqabane leMedia kunye noMvelisi weNAB Veza UKUPHILA. Iindaba zoSasazo lobuNjineli
Ikhaya » iindaba » URuan Luong weRSP unceda ekulungiseleleni amagcisa eVFX exesha elizayo
URuan Luong weRSP unceda ekulungiseleleni amagcisa eVFX exesha elizayo
Umncedisi katitshala unyanzelisa abafundi bakhe ukuba baxhamle izibonelelo ezizodwa ngokuqeqeshwa kwiziko lokufundela elikumgangatho wehlabathi.
IAdelaide, kumazantsi eOstreliya- Olunye lwezibonelelo zenkqubo yoqeqesho lweziphumo ezibonakalayo kwiRising Sun Pictures (RSP) kukuba iiklasi zifundiswa ngaphakathi kwesitudiyo sokusebenza, esiye sazisa ngokubonakalayo okungaqhelekanga kwezi bhokisi zeofisi zibetha njenge Ford v Ferrari, Isigcawu-Indoda: Kude neKhaya kwaye UCaptain Marvel. Abafundi ababhalise kwezi zifundo bafumana inqanaba lokuqala lemfundo kwiziphumo ezibonakalayo kunye nengqina, isandla sokuqala, ukuba ezo zakhono zisetyenziswa njani ngabazobi abakwinqanaba eliphezulu beluka umlingo we-cinematic kubabhloksi bangomso.
U-Huan Luong, upeyinti omncinci kunye nomzobi we-roto kunye nomncedisi wokufundisa studio, uthi abafundi be-RSP bonwabele isibonelelo esikhulu sokungqongwa ngabantu abayimizekelo abanamava. "Ndixelela abafundi ukuba, ukuba bazimisele ngokuba ngoochwephesha, eyona nto banokuthi bayenze kukuya emgangathweni bathethe namagcisa aphezulu," uyacacisa. “Banolwazi namava. Bayayazi into abahamba kuyo abafundi, kuba nabo sele beyigqibile. Baxhasa amagcisa amancinci kwaye bayakuvuyela ukunceda. ”
U-Luong kufanele ukuba azi njengoko wayeziqeqesha kwi-RSP ngokwakhe. Ngelixa wayesebenzela iBachelor yoBugcisa beMedia kwiFilimu nakwiTelevishini kwiYunivesithi yase-Australia yase-Australia (i-UniSA), waqala izifundo ze-VFX zokuBekwa ezibandakanya ukuDibanisa kunye nokuKhangela kunye neZiphumo eziDlamkileyo kunye nokuKhanyisa. Ikhosi nganye yayimiselwe ukujonga imeko ye studio yobungcali ebekwe ezantsi eholweni kwaye abafundi basebenze ngokudibeneyo ukugqibezela imisebenzi ngokungathi babelwe ifilimu yokwenyani. "Sisebenze kunye nesoftware efana noMaya, uNuke kunye noHoudini, isoftware efanayo esetyenzisiweyo phantsi, kwaye sapapasha iiasethi ngombhobho ofanayo," uyakhumbula. Saside sisebenzise iiasethi ezivela kwiiprojekthi zangaphambili ezenziwe apha kwi-RSP. Amava azive eyinyani. ”
Njengomncedisi wokufundisa, uLuong usebenza phantsi kwabaqeqeshi abaphezulu besitudiyo, abangamagqala exesha elide kwishishini lezinto ezibonakalayo ezinamava ngokuthe ngqo, kwezandla kwiiprojekthi zefilimu kunye neeprojekthi zikamabonwakude. Indima yakhe kukukhokela abafundi njengoko besebenza ngobuchule besoftware kunye nobuchule. Uthi: "Ndiyonwabela amava omntu ngamnye ngabafundi abahambahambayo." “Ndiyayithanda into yokusombulula ingxaki yomsebenzi wam njengegcisa, kodwa ndiyathanda ukunceda abafundi basombulule iingxaki zabo. Kwizinto ezibonakalayo, yonke imeko yahlukile kwaye ifuna isisombululo esahlukileyo. Ndifundisa abafundi ukuba bacinge ngobuchule. ”
U-Luong uphawula ukuba uqeqesho kwi-RSP lungaphaya kokufunda isoftware. Abafundi bafundiswa indlela yokuba ziincutshe kunye nendlela yokuqalisa ngokusungulwa kolu shishino. Isitudiyo sibamba iiseshoni ze- "Day in the Life" apho amagcisa anobuchule avela kumasebe ahlukeneyo athetha ngomsebenzi wabo kunye neendlela zomsebenzi. Abasebenzi be-RSP be-HR babonelela ngengqondo yokwakha i-showreels, izakhono zodliwanondlebe kunye neendlela zokukhangela umsebenzi. "Abafundi banokusebenzisa ixesha labo apha ukwenza unxibelelwano nabahlohli babo, abanye amagcisa kunye nabanye abafundi, utshilo. Obo budlelwane buba nemiphumo emihle emva kokuba begqibile kwaye beqalele ikhondo lomsebenzi. ”
Kwakhona, uLuong uthetha ngamava akhe. Kungekudala emva kokuba egqibe ikhosi yokuBekwa kwe-VFX kwaye wafumana isidanga sakhe e-UniSA, kwavela ukuvulwa kwi-RSP. Wanikwa isikhundla esisekwe kwimvakalelo eyomeleleyo awayeyenza kubahlohli bakhe nakwabanye abasebenzi be studio. Ngoku wahlula ixesha lakhe phakathi komncedisi wakhe wokufundisa uxanduva kunye nomsebenzi phantsi njengomculi omncinci. "Yeyona nto ibalaseleyo kula mazwe mabini," uyacacisa. “Ndiza kusebenza nabafundi ngelixa ndiqhubeka nokukhulisa izakhono zam njengegcisa. Xa ndisebenza phantsi, ndihlala ndifumana into entsha endinokwabelana ngayo nabafundi bam. ”
U-Luong uthi abafundi abazimiseleyo, bayazibhokoxa kwaye basebenzise amathuba afumanekayo estudiyo banendlela ecacileyo phambi kwabo. Uthi: "Abafundi bashiya apha bezilungiselele kakuhle ukuba bangene kwiindima zabaculi abancinci," utshilo. “I-RSP inamabali amaninzi empumelelo axhasa eli bango. Abafundi bethu baqeshwe kwizitudiyo kulo lonke elase-Australia nakwamanye amazwe. Abanye banethamsanqa ngokwaneleyo ukuba basebenze apha, njengam. ”
Kwiminyaka engaphezulu kwamashumi amabini iRising Sun Pictures (RSP) inoxanduva lokuyila ezinye zezona zinto zibalulekileyo ezingalibalekiyo kwihlabathi. Isitudiyo sisekhaya ngaphezulu kwama-150 amagcisa anetalente eyodwa asebenza ngokubambisana ukuhambisa imifanekiso engakholelekiyo. Ukujolisa ekuveliseni kuphela olona mgangatho uphezulu kunye nezisombululo, i-RSP iyile imibhobho eguqukayo, evumela inkampani ukuba inyuse ngokukhawuleza kwaye ihlengahlengise ukuhamba kwayo, ukuhlangabezana nemfuno yabaphulaphuli yemiboniso engapheliyo.
Isitudiyo sonwabela ukubakho eAdelaide, esinye sezona zixeko zixabisekileyo ehlabathini. Oko, kudityaniswa nodumo lwayo oluhle, kunye nokufikelela kwesinye sezona ziphulelo zinkulu nezinokuthenjwa, kuyenze yaba ngumazibuthe kubenzi beefilimu kwihlabathi liphela. Oku kuye kwakhokelela i-RSP kwimpumelelo eqhubekayo kwaye yabenza ukuba babe negalelo kuluhlu lweeprojekthi kubandakanya uMhlolokazi Omnyama, UFord V Ferrari, Isigcawu-Indoda: Kude neKhaya, iiX-Men: IPhoenix emnyama, uKapteni uMarvel, uDumbo, uMphangi, uTomb Raider, uPeter Rabbit, uMhlaba weZilwanyana, iThor: Ragnarok, Logan, Pan, i X-Men franchise kunye Game of Thrones.
I-PNYA "Ikhefu lesithuba" sokuphonononga ukuPhawulwa kwaBantu kunye neNtlalontle yoLuntu yaBasebenzi abaQalayo - Februwari 23, 2021
I-MOD iqala itheko liqale kumdlalo omkhulu - Februwari 19, 2021
URuan Luong weRSP unceda ekulungiseleleni amagcisa eVFX exesha elizayo - Februwari 17, 2021
Previous: U-Eduardo Solana Ujoyina iiNethiwekhi zeTVU njengoMlawuli weNtengiso weLatin America
next: Uyilo lweBlackmagic Yazisa ngeKhamera eNtsha yeBlackmagic Pocket Cinema 6K Pro